Samsung ayaa hakisay soo saarista Galaxy Note 7 | Wararka IPhone
Samsung ayaa joojisay soo saarista Galaxy Note 7
Dib u cusbooneysiinta Xusuusin 7, waxay ka boodeen lambarka 6 si ay u sii hayaan lambar lamid ah midka Galaxy S, uma muuqato inay ahayd go'aan caqli badan Samsung. Inta udhaxeysa dhamaadka Ogosto iyo bilowga Sebtembar, isticmaaleyaal badan ayaa dhibaato la soo kulmay Note 7, terminal in markii ay lacag bixinaysay ay bilaabatay inay gubto sabab la'aan. Samsung ayaa aqoonsatay dhibaatada ilaa iyo maanta waxay badashay in ka badan 2,5 milyan oo unug, sababo la xiriira dhibaato batteriga ah oo qatar u ah qarax.
Laakiin waxay umuuqataa in boosteejooyinka loo adeegsado in lagu beddelo unugyada cilladaha leh ay weli leeyihiin dhibaato isku mid ah. Markay la kulantay suurtagal la'aanta helitaanka waxa dhibaatada dhabta ahi tahay, Samsung waxay go'aansatay inay curyaamiso soo saarista Galaxy Note 7. Kiisaska qaraxyada cusub ee qaabkan terminal-ka ee Mareykanka, Kuuriya iyo Shiinaha waxay xaqiijinayaan in dhibaatadu u muuqato inay ka sii badan tahay ka culus sidii markii hore loo fikiray. Warshada Samsung ee dalka Vietnam, halkaasoo Galaxy Note 7 hadda lagu farsameeyo waxaa lagu sameyn doonaa kormeer dhameystiran si loo xaqiijiyo asalka qaraxyada ka dhacay goobtaan Waxay u sabab tahay fashil ku yimid safka isku imaatinka ama in kastoo ay dhibaato ku tahay qaybaha.
Joojinta waxsoosaarka terminalkan warshadda Vietnam sidoo kale waxaa sababa cadaadiska Samsung ay ka heshay ururada macaamiisha ee dalalka uu terminal-kani ku soo laabtay si uu u bixiyo dhibaatooyin. In kasta oo markan lambarka qalabku aad uga hooseeyo kan asalka ah, haddana Samsung waxay doonaysaa inay hubiso in aanay jirin dhibaatooyin dambe oo mustaqbalka la xiriira goobtani. Intaas waxaa sii dheer, qaar ka mid ah hawlwadeenada ayaa bilaabay inay ka fiirsadaan joojinta bixinta Galaxy Note 7 oo ka mid ah terminaladooda, go’aankaas oo wax weyn u dhimi doona iibka terminal-ka Mareykanka, halkaasoo Samsung ay ku leedahay suuq ballaaran.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Tartanka » Samsung ayaa joojisay soo saarista Galaxy Note 7
Dacwada ficilka fasalka ee ku saabsan dhibaatada shaashadda iPhone 6 ayaa soo uruurineysa dardar